REENOEMANN: လွမ်းတယ် အမေ
Posted by Ree Noe Mann at 7:07:00 PM
တကယ်တော့ ဘ၀တွေက ငှက်ကလေးတွေလိုပါပဲ
မိဘ နဲ့ အိုးမကွာ အိမ်မကွာ နေပြီး ပြု စု လုပ်ကျွေးခွင့် ရတဲ့သူ ဆိုတာ အက်မတန်မှ ရှားပါတယ်
ငယ်ငယ် ကမှ အမေ့ကို ပြန်ပြီး လုပ်ကျွေး နိုငသေးတယ် တချို့ တွေဆို.. အသက်တွေ ဘယ်လောက်ကြိးကြီး မိဘ ဆီ လက်ဖြန့်တောင်းလိုက် သောက်လိုက်စားလိုက် လေးတွေ ရှိနေတော့
ငယ်ငယ် က အများ ကြီးတော်ပါသေးတယ်
ဖြစ်လာတာ က .. ဘ၀.. တဲ့..
ဘ၀ဆိုတာ ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဆိုတော့လဲ
ဒီလိုဘဲ အားမာန်နဲ့ ပျံသန်းနေကြရတာပါဘဲ။
ဘ၀အတွက် မိဘနှင့်ခွဲပြီးနေချင်လဲ နေရမယ်။ ချစ်သူနှင့်လဲ ခွဲပြီးနေရကောင်းနေရနိုင်တယ်။ ယုတ်စွအဆုံး ပျံသန်းရင်းနဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကြေမွသွားကောင်း သွားနိုင်တယ်။
ဆက်လက်ပြီး တောင်ပံချီ ပျံသန်းပါ။
အဆင်ပြေတဲ့ အနာဂါတ်ဆိုတာ မိဘမေတ္တာသိတတ်သူနှင့် ကြိုးစားရုန်းကန်သူအတွက် မကြာခင်ရောက်လာတော့မှာပါ။
ကျနော်က ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကတည်းက အိမ်ကထွက်လာခဲ့တာ။ ၁၇နှစ်သားဆိုပါတော့ဗျာ။ ၁၈နှစ်မှာ အလုပ်တစ်ခု စလုပ်ခဲ့တယ်။ အခုအချိန်အထိ အလုပ်တွေလုပ်နေရတုန်းပဲ။ ကျနော့ အမေ့ရင်ခွင်ကို ဧည့်သွား ဧည့်လာလိုပဲ သွားနေခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းမို့ အဝေးရောက်သားဆိုးတစ်ယောက် လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခံယူလိုက်တယ်။ အမေလည်း ကျနော့ကိုလွမ်းနေမှာလေ..ကျနော်ကရော....
သေချာတာပေါ့..အစ်ကိုရာ.. အမေ့ရင်ခွင်ဟာ အနွေးထွေးဆုံးပါပဲ...
ပိုစ်လေးဖတ်ပြီးတစ်စုံတစ်ရာပေါ့ ခံစားမိတယ် အစ်ကို
အကျဉ်းလေးရေးထားပေမဲ့အကိုဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘ၀
က ဒီစကားလုံးတွေထက် အဆပေါင်းများစွာခက်ခဲနေ
မှာပါ . . . အနွေးထွေးအိမ်ဟာလည်း အမေ့ရဲ့ အိမ်ဆို
တာ အကြွင်းမရှိလက်ခံပါတယ် အစ်ကို . . . အဆင်ပြေ
ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ . . .
ဒီရက်ပိုင်း အမေ့ကို လွမ်းလို့ စာရေးသူတွေ ပေါနေတယ်။
မိခင်ကို သတိရတာ ကောင်းပါတယ် အစစ အရာရာ အောင်မြင်ပါစေ ညီလေးရေ........
အင်း..ကိုရီနိုရေ.. ကျွန်တော်လည်း ဟင်အင်းပါပဲဗျာ။
အစ်ကိုရီနိုရေ. မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက် အရာရာ အောင်မြင်ပါစေ.။ အမေ့ရင်ခွင်မှာလည်း နားစက်နိုင်ပါစေ.။
ဘယ်မှာမှတော့ မအေးချမ်းပါဘူးး ..
ဘ၀ ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ ...
စိတ်ဓာတ်ကျမသွားဖို့သာ အဓိကပါ ...
မိဘကို သိတတ်တဲ့ သားသမီး စိတ်ချမ်းသာမှာပါကွာ
တကယ်တော့ မိဘကို ခွဲချင်လို့ ခွဲခဲ့တာမှ မဟုတ်ပဲကွာ..
လွမ်းတယ်အကိုရာ အမေ့ကို အရမ်းလွမ်းတယ် ခုဆို ကျွန်းပေါ်ကျနေတာ ၂နှစ်တောင် ရှိပြီ ကျနော်လဲ တူတူပါပဲ.. ပြန်မလားဆို နိုးပဲ တတ်နိုင်သေးတယ်ဗျာ
ဒီလောက်ထိတောင် ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီပဲ .. အောင်မြင်မှုက ရလာတော့မှာပါ .. ဆက်ပြီး ကြိုးစားပါ .. အမေ့ရင်ခွင်ကိုလည်း အမြန်ပြန်နေခွင့်ရပါစေ ..း)
တကယ်ပါပဲဗျာ အမေ့ရင်ခွင်လောက် ဘယ်ဟာမှမတမ်းတမိဘူး
မေသူတို့ လဲကြိုးစားနေရတုန်းပါပဲ အစ်ကိုရိန်နိုရေ.. ဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူး...း(
အမေ၊ အဖေတို့ နဲ့ တော့ အတူနေချင်တာပေါ့...
ရီနိုရေ..မိသားစုနဲ့ တူတူနေချင်တာပေါ့။ မဖြစ်နိုင်သေးတော့လဲ ဒီလိုပဲ နေရဆဲ။ တနေ့ အမေ့ရင်ခွင်မှာ နားရဦးမယ်လေ။ အားမလျော့နဲ့ ဆက်ကြိုးစား။
နိုဝင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ မငုံအမေ မွေးနေ့ပိုစ့်တင်ဦးမယ်။ လာအားပေးဦး။
ဘဝကိုက ဒီလို အဝေးရောက်စေမယ့်
အမိမြေ အမေ့အိမ် အမေ ဆိုတဲ့အသံကြားရုံနဲ့တင်
ဒါက အဝေးကိုရောက်နေတဲ့ အမေ့သား အမေ့သမီးတိုင်းရဲ့
၉၀% မြန်မာတွေက အမိမြေနဲ့ မိသားစုနဲ့ မခွဲခွာချင်ပဲ ခွဲခွာနေကြရတာပါ။
ငါတော့ ၄ နှစ်ရှိနေပြီ
စိတ်ထဲမှာတော့ အိမ်ကို လွမ်းကြတာ အတူတူပါပဲကွာ
မင်းလွမ်းသလို ငါတို့ အားလုံးလည်း လွမ်းနေကြတာပါပဲ